ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ အယ်ကလပ်ဆီကို ပွဲကို ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းခေါင်းဆောင် ရာမိုစ့် လွဲချော်မှာလား? – Myan Ball
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းခေါင်းဆောင် ရာမိုစ့်ဟာ ဒီတစ်ပတ် စနေနေ့မှာ ကစားမယ့် ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ အယ်ကလပ်ဆီကို ပွဲကို ဒူးဒဏ်ရာ မသက်သာသေးလို့ လွဲချော်နိုင်ဖွယ်ရှိနေပါတယ်။ အသက် ၃၄ နှစ်အရွယ်ကစားသမားဟာ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က အိမ်ကွင်းမှာ ကစားခဲ့တဲ့ ကာဒစ်ဇ်အသင်းကို (၁-ဝ) နဲ့ ရှုံးခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ရှက်တာဒိုးနက်ကို (၃-၂) န့ဲရှုံးခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်အုပ်စုအဖွင့်ပွဲကိုလည်း လွဲချော်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
ကာဒစ်ဇ်ကို ရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲ ပထမပိုင်းမှာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ကွင်းထဲက ထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့ ရာမိုစ့်ဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ စနေနေ့ပွဲမှာ အချိန်မီ သက်သာလာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ဒဏ်ရာ ရရှိပြီးကတည်းက တစ်ယောက်တည်း သီးသန့်လေ့ကျင့်ရေး ဆင်းနေတာဖြစ်ပြီး နူးကမ့်ကို သွားရောက်ကစားမယ့်ပွဲအတွက် ကြံ့ခိုင်မှုစစ်ဆေးရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရာမိုစ့်ဟာ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ သမိုင်းမှာ အယ်ကလပ်ဆီကိုပွဲကို (၄၄) ပွဲနဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းခေါင်းဆောင် မက်ဆီထက် တစ်ပွဲပိုပြီး အများဆုံးကစားထားတဲ့ ကစားသမားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကိုယ်စီက ပြည်တွင်းလိဂ်ပွဲတွေကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာ နဲ့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းတို့ဟာ စနေနေ့မှာ နိုင်ပွဲရအောင် ကိုယ်စီ ကစားရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ အင်္ဂါနေ့က ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဘာစီလိုနာအသင္းနဲ႔ အယ္ကလပ္ဆီကို ပြဲကို ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းေခါင္းေဆာင္ ရာမိုစ့္ လြဲေခ်ာ္မွာလား?
ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းေခါင္းေဆာင္ ရာမိုစ့္ဟာ ဒီတစ္ပတ္ စေနေန႔မွာ ကစားမယ့္ ဘာစီလိုနာအသင္းနဲ႔ အယ္ကလပ္ဆီကို ပြဲကို ဒူးဒဏ္ရာ မသက္သာေသးလို႔ လြဲေခ်ာ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေနပါတယ္။ အသက္ ၃၄ ႏွစ္အရြယ္ကစားသမားဟာ ျပီးခဲ့တဲ့အပတ္က အိမ္ကြင္းမွာ ကစားခဲ့တဲ့ ကာဒစ္ဇ္အသင္းကို (၁-၀) နဲ႔ ရႈံးခဲ့တဲ့ ပြဲမွာ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့တာျဖစ္ျပီး ဗုဒၶဟူးေန႔က ရွက္တာဒိုးနက္ကို (၃-၂) န႔ဲရႈံးခဲ့တဲ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္အုပ္စုအဖြင့္ပြဲကိုလည္း လြဲေခ်ာ္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။
ကာဒစ္ဇ္ကို ရႈံးခဲ့တဲ့ပြဲ ပထမပိုင္းမွာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ျပီး ကြင္းထဲက ထြက္ခြာခဲ့ရတဲ့ ရာမုိစ့္ဟာ ဘာစီလိုနာအသင္းနဲ႔ စေနေန႔ပြဲမွာ အခ်ိန္မီ သက္သာလာျခင္းမရွိေသးပါဘူး။ ဒဏ္ရာ ရရွိျပီးကတည္းက တစ္ေယာက္တည္း သီးသန္႔ေလ့က်င့္ေရး ဆင္းေနတာျဖစ္ျပီး ႏူးကမ့္ကို သြားေရာက္ကစားမယ့္ပြဲအတြက္ ၾကံ့ခုိင္မႈစစ္ေဆးရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။
ရာမုိစ့္ဟာ ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းရဲ႕ သမိုင္းမွာ အယ္ကလပ္ဆီကိုပြဲကို (၄၄) ပြဲနဲ႔ ဘာစီလိုနာအသင္းေခါင္းေဆာင္ မက္ဆီထက္ တစ္ပြဲပိုျပီး အမ်ားဆံုးကစားထားတဲ့ ကစားသမားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ျပီးခဲ့တဲ့အပတ္ကိုယ္စီက ျပည္တြင္းလိဂ္ပြဲေတြကို ရႈံးနိမ့္ခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာ နဲ႔ ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းတို႔ဟာ စေနေန႔မွာ ႏိုင္ပြဲရေအာင္ ကိုယ္စီ ကစားရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာစီလိုနာအသင္းကေတာ့ အဂၤါေန႔က ခ်န္ပီယံလိဂ္မွာ ဂိုးျပတ္ႏိုင္ပြဲရရွိခဲ့ပါတယ္။